युगसम्बाद साप्ताहिक - माधव र केपी दुबै सम्पूर्णता हैनन्
Wednesday, 10.16.2019, 02:55pm (GMT+5.5) Home Contact
माधव र केपी दुबै सम्पूर्णता हैनन्
Monday, 06.09.2014, 08:15pm (GMT+5.5)
- प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले
० नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनको नजिकिंदै गर्दा पार्टीको नीतिभन्दा पनि नेतृत्वतिर बढी ध्यान केन्द्रित हुन थालेको आरोप लागेको छ ? महाधिवेशन तयारी कहाँ पुग्यो ?
यो आरोप हैन, सत्य हो । कस्तो अनौठो भने महधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदनलाई एमालेको इतिहासमै अनौठैसंग स्थायी कमिटीले सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्याे र केन्द्रीय कमिटीबाट पनि त्यस्तै भयो । त्यसपछि संगठनात्मक प्रस्ताव पनि पारित हुन्छ र त्यसमा उठेका केही कुराहरूमा अलि बढी बहस हुन्छ । संगठनात्मक प्रस्तावमा केही महत्वपूर्ण विषयहरू उठेका छन् । हाम्रा युवा नेताहरूले ६० वर्षलाई सक्रिय नेतृत्वबाट अवकाश दिने भनेका छन् त्यो पास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किनभने अहिले सिंगो स्थायी कमिटी ६० नाघेर ६५–६६ पुगिसकेका छन् । उहाँहरू नवौं महाधिवेशनसम्म पाउँ त्यसपछि अवकाश लिउँला भन्ने स्थितिमा पुग्नुभएको छ र त्यो दिनु पनि पर्छ । किनभने उहाँहरूले नै ७० वर्षको अवकाश प्रणाली ल्याउनुभएको छ । त्यसैले त्यो पनि मिल्छ ।
० त्यसो भए अवकाश पाउने उमेर ७० वर्ष हुन्छ ?
मैले भन्नुपर्दा अब दशौं महाधिवेशनदेखि तपाईहरूकै हो भनेर शीर्ष नेताहरूले छोडिदिएकै अवस्था त हो नि त्यो । त्यसैले उमेर हद ७० वर्र्षमै बस्ला । अरु त सामान्य पदाधिकारीहरू कति राख्ने भन्ने टुंगो पनि सजिलै लाग्छ ।
० अहिलेसम्मको तयारी अनुसार महाधिवेशन सर्ने सम्भावना छैन त्यसो भए ?
कताकती त्यस्तो आशंका व्यक्त गरिएको भए पनि अब महाधिवेशन सर्ने सम्भावना छैन । नेकपा एमालेभित्र कतिपय हामीभन्दा अग्रगामी विचारका मान्छे छन् । हामीले केही सोचेकैं हुँदैनौं ड्याङड्याङ लेख्दिन्छन् । यो महाधिवेशन सर्ने कुरो पनि अरुले नै लेखेको हो । हाम्रोमा बहस के चलेको थियो भने मध्य वर्षाको समय परेको हुँदा सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भनेर लामो छलफल चलेपछि महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरू धान रोप्ने, गोड्ने काममा लाग्नेखालका छैनन् त्यसले गर्दाखेरी सकिन्छ भन्ने भएको हो । महाधिवेशनको उद्घाटनमा पनि ठूलो जनसहभागिताको आकांक्षा नराखौं, हलमै उद्घाटन र हलमै समापन गरौं भनेर १९ गतेको मिति तोकिएको हो ।
० पार्टीको नीतिगत हिसाबमा कुनै समस्या नरहे पनि नेतृत्वमा चर्को प्रतिस्पर्धा र गुटबन्दी नै देखिएको छ । यहाँहरू नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा गर्दै आउनुभएको छ । के अब एमालेको नेतृत्व केपी ओलीमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ?
यहाँ दुईटा कुरा छ– पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण । हाम्रो पार्टीमा यी दुइटै कुरा छन् । हस्तान्तरणमा इमान छ, पुस्तान्तरणमा इमान छैन । हस्तान्तरणको कुरा गर्दा हाम्रो पार्टीका चारजना नेता हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, केपी ओली र बामदेव गौतम । यी चारजना नेताले स्वेच्छाले अवकाश पाउने दिन ७० वर्ष भएपछि मात्र आउला । उहाँहरू चार रहुञ्जेलसम्म नेतृत्व तल नझर्ने भो, सबैको पालो पुर्याउनैपर्ने भो भन्ने लागेपछि हामी केही पोलिटब्यूरो सदस्य सदस्यहरूमध्ये पुरानो स्थायी कमिटीमा रहेका म, मुकुन्द न्यौपाने, केशव बडाल र अरु नयाँ सदस्यहरूले एउटा योजना बनायौं । झलनाथजीले दुईपल्ट दुईपल्ट चलाउनुभो १४ वर्ष नेता हुनुभो । माधवजीले ३ पल्ट गर्नुभो र १५ वर्ष नेता हुनुभो । बामदेवजीले पनि १ पटक गर्नुभो र चार वर्ष नेता हुनुभो । त्यसैले चार नेतामा पाउँदै नपाएको केपी ओलीलाई यसपल्ट अध्यक्ष बनाएर बिदा गरौं भन्ने हाम्रो सोच रह्यो र यो सोच कहीं नलुकाई सबभन्दा पहिले अध्यक्षसंग कुरा गर्याैं, त्यसपछि माधवजीसंग, त्यसपछि बामदेवजी र अन्तिममा केपी ओलीसंग कुरा गर्याैं । हाम्रो भनाई हस्तान्तरणका लागि योभन्दा अर्को विकल्प कि दिनुस् कि मान्नुस् भन्ने हो ।
० तपाईंहरूले यस्तो प्रस्ताव राखे पनि माधव नेपालले केपी ओली एउटा गुटको नेता हुनसक्छन् पार्टीको हुन भन्दै आ उम्मेदवारीको चर्चा आफ्नो चलाउनुभएको छ । तपाईं के देख्नुहुन्छ नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा ओलीतिरै जान्छ कि निर्वाचन हुन्छ ?
केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने प्रयास हामीले हिजो अस्ती मात्र गरेको हैन । हाम्रा अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भैसकेपछि देखापरेका केही परिघटनाहरूले गर्दा हामी अब नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ भनेर त्योबेलादेखि लागेका छौं । हामीले पार्टी अध्यक्षको चाहना राख्ने चारैजना नेतालाई यो प्रस्ताव राखेका हौं । अध्यक्ष हुने त चारजनामध्येबाटै हो नि । अहिले तत्काल पाँचौं नेता आउन सम्भव छैन । त्यतिखेर माधवजीसंग वार्ता गर्दा उहाँले पुस्तान्तरणको कुरा उठाउनुभो । हामीले तपाईंहरू युवाहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि नराम्रो हैन हाम्रा युवाहरू त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने ठाउँमा छन् कि छैनन् भन्ने पहिले अध्ययन गर्नुपर्छ भन्यौं । उहाँले हस्तान्तरण हैन पुस्तान्तरण भनेर त्यतिखेरै अल्झो राख्नुभएको रहेछ ।
पाँचौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्य सबैले छोड्ने भनिसकेपछि त्यस्तो अवस्थामा विष्णु पौडेलसम्मको नेतृत्व बाहिर जान्थ्यो । त्यसमा पनि हामीले आपत्ति गरेनौं किनभने म र मुकुन्दजी युवाहरूमाथि बढी विश्वास गर्ने नेता हौं । पाँचौं महाधिवेशनदेखि निर्वाचन भएका सबै बाहिर बसौं भन्ने हो भने पनि बसौं भनेर हस्तान्तरण नभएर पुस्तान्तरणामै जाऔं भनेर हामी सहज ढंगले निस्क्यौं । पछि उहाँले भाखा फेर्नुभो । उहाँले सबै निस्कपछि त रित्तै हुन्छ कोही न कोही त रहनैपर्छ भन्ने कुरा निकालेपछि यहाँ इमान छैन भन्ने लाग्यो । उहाँले पुस्तान्तरण हुँदा पनि कोही न कोही नेता चाहिन्छ भन्दै आफ्नो लागि ठाउँ सुरक्षित राख्नेतिर लाग्नुभो । पुस्तान्तरणको कुरा त आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्ने मेसो पो रहेछ ।
० तर माधव नेपाल त नेतृत्व भन्ने कुरा दिएर पाइँदैन क्षमता देखाउनुपर्छ । केपी ओलीमा पार्टी चलाउने क्षमता छैन भन्नुहुन्छ । तपाईं लामो समयसम्म नेपालकै साथमा रहेर काम गर्नुभो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
म धेरै भन्न चाहन्न । मैले भन्नुपर्याे भने के के भन्नसक्छु भन्ने मलाई थाहा छ । म जहिले पनि हरेक महासचिव या अध्यक्षको सबभन्दा नजिक रहेर काम गरेको छु । म मदन भण्डारीकै कति नजिक थिए, माधव नेपालकै कति नजिक थिएँ, झलनाथलाई पनि सहयोग गर्थे तर उहाँले नजिक बनाउन चाहनुभएन । उहाँले अध्यक्ष भएपछिको पहिलो बैठकमै प्रदीप नेपाललाई कुनै जिम्मेवारी दिन सकिंदैन भनेर घोषणा गरेपछि म पर भएको मात्र हुँ । मैले माधव नेपाललाई सघाएको छु र उहाँ विचारमा, सिद्धान्तमा, संगठनात्मक क्रियाकलापमा कति कुशल हुनुहुन्छ भन्ने मलाई सबै थाहा छ । उहाँको सबैभन्दा राम्रो गुण भनेको सक्रिय रहनु हो र अब त्यो सक्रियता पनि स्वाभाविक रुपमा घट्दै जान्छ उमेरले गर्दा । कुनै जमानामा उहाँ कुदेको कुद्यैं गर्न सक्नुहुन्थ्यो । यो एउटा राम्रो गुण छ । अहिले केही घटेको देखिए पनि झलनाथ, केपीको भन्दा बढी नै छ ।
० माधव नेपालको यही सक्रियताले गर्दा अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्छ निर्वाचन भए पनि भन्नेहरू पनि छन् ? तपाईं के देखिरहनुभएको छ ?
दौडेर पार्टी चल्दैन । पार्टी विचार, सिद्धान्त र टीमले चलाउँछ । हाम्रा भाइबैनीहरूले व्यक्ति केन्द्रित राजनीति चलाइदिएर नकाम गरे । भारतका मोदी क्रेज के आएको थियो नेपालमा माधव क्रेज र केपी क्रेजकोबीचमा भीडन्त होला जस्तो भो । न केपी सम्पूर्णता हो न माधव सम्पूर्णता हो । माधवलाई पनि ८–१० जनाको टीम चाहिन्छ र केपीलाई पनि । त्यो टीम कोसंग छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्छ । यतिखेर नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा त्यो टीम केपी ओलीसंग छ ।
० तपाईं आफू ओलीतिर भएर त्यो टीम छ भनेको त हैन नि ?
हैन, केपी टीमको एउटा सदस्य म पनि हुँ । म अझैं पाँच वर्ष दौडधुप गर्छु । किनभने हस्तान्तरणको लडाई मैले थालेको हुनाले १३ जना पोलिटब्यूरोको विश्वास मसंग भएको हुनाले मैले पाँच वर्षा थेग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।
० तपाईंहरू पालो पुर्याउने भन्दै जाँदा भोलि तपाईंको, त्यसपछि अर्कोको, बामदेव गौतमकै पालोको कुरा पनि आउला ? अनि पुस्तान्तरण त फेरि लथालिंगै हुँदैन र ?
हैन, बामदेवजीले म थोरै समय भए पनि महासचिव भैसके, मेरो पालो पुग्यो भन्दै ओपीप्रति सद्भाव राख्नुभो । उहाँहरू दुईजना त पटक्कै नमिल्ने मान्छे हो नि । त्यसै गरी झलनाथ र माधव नेपालहरूले हामीले पाइसक्यौं अब केपीलाई दिउँ उहाँले केही पाउनुभएको छैन भन्ने सद्भाव राखेर एउटा कार्यकाल छोडदिउँ भनेर बामदेव गौतमले जसरी सदासयता उहाँहरू दुईजनाले झन् बढी देखाउनुहोला भन्ने लागेको थियो त्यो पाइएन । झलनाथजी बोलिरहनुभएको छैन तर उहाँ स्थिर हैन ।
० सम्भावनाका हिसाबले तपाईं के देख्नुहुन्छ । नेतृत्व चयन त चुनावी दौडमा जाला जस्तो छ ?
केपीले जित्नुहुन्छ । त्यसमा शंकै छैन । अब तपाईं भन्नुहोला त्यसको आधार के भनेर ? दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मैले ९२ सिट एमालेले जित्छ भनेको थिएँ, ९१ जित्यो । मेरो प्रक्षेपणमा १ सिट घट्यो । त्यति मिलाउनसक्ने क्षमता यो अभियानमा लागेका हामी १३ जना पोलिटब्यूरो सदस्य छ । हामीले १४ वटै अंचलमा सर्भे गरेका छौं । सबैतिरको सूचना संकलन गर्दाखेरी हामीले के पाएका छौं भने अहिलेको नेतृत्व केपी ओलीलाई नै दिनुपर्छ ।
अध्यक्ष पदमा पराजित भएपछि माधव कमरेडलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । अहिले उहाँ वरिष्ठ नेता हुनुभएको छ । अहिले त विधानले के भन्छ भने पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुने बनाइदियो । यो विधान पास पनि हुन्छ । यस्तो स्थितिमा चुप लागेर बसेदेखि सम्मानित नेता त भैरहनुहन्थ्यो सधैं, हारेपछि उहाँलाई सम्मानित नेता भन्न पार्टी तयार हुन्छ कि हुँदैन म भन्न सक्दिँन । यति हुँदाहुँदै पनि म असार १८ गतेसम्म सहमतिको प्रयासमा लाग्छु ।